Sida loo diyaariyo arooska: talaabooyinka la raaco iyo talooyinka | Ragga Stylish
Haddii aad ka mid tahay kuwa leh lammaane aadna ku talo jirto inaad guursato, ha u maleynin in diyaarinta aroosku ay tahay arrin dumar. Ragga sidoo kale waa inay gaaraan go'aanka ah inay abaabulaan waxyaabaha maadaama ay sidoo kale tahay arooskooda. Waxa ugu muhiimsani waa inaad ka fikirto in dhammaan dadaalka aad geliso ay wax ka tarayaan maalinta ugu muhiimsan noloshaada. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la barto sida loo diyaariyo aroos.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa tillaabooyinka la raaco iyo talooyinka ugu fiican ee ku saabsan sida loo diyaariyo midka wanaagsan.
1 Isku hagaaji jadwalka
2 Qaabka shaqsiyeed ee lagu barto sida loo diyaariyo arooska
3 Sida loo diyaariyo arooska: faahfaahin
Isku hagaaji jadwalka
Midda ugu horreysa oo dhan waa in lagu diyaariyo jadwalka ugu dambeeya dhammaan howlaha aad qaban doontid. Xidhiidh kujira tirinta ugu foosha xun. Waxa ugu horreeya waa in la ogaado oo la doorto nooca moodada ah ee aad doonayso inaad yeelato. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo diyaariyo aroos iyadoo kuxiran waxaad u dabaaldegeyso. Xaddidaadda ayaa gabi ahaanba ku dhow labada dhinac waana inaad qeexdaa nooca xiriiriyaha aad rabto inaad yeelato. Malaha go'aanka ugu muhiimsan ayaa ah go'aaminta in la sameeyo xaflad diineed ama madani ah.
Xaaladda ay go aamineyso arooska diiniga ah, waxaa lagama maarmaan ah in lala xiriiro maamulka guud ee magaalada si ballan loogala sameeyo wadaadka kaniisadda. Sidan ayaa loo dhigaa taariikhda arooska. Dhinaca kale, haddii xafladda madaniga la aasaaso, waa inaad tagtaa maxkamadaha si aad u awoodo inaad sheegto dhammaan shuruudaha iyo habraacyada sharci ee lagu fulinayo dhacdada.
Marka go'aankan la gaaro sida lamaanaha, taariikhda iyo waqtiga meherka la calaamadeeyay. Sidoo kale waa in la qeexaa haddii ay tahay xiriir toos ah ama aan rasmi ahayn. Marka tan la aasaaso, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la abuuro liiska martida caanka ah. Tani waa shuruud aasaasi ah marka la xulanayo ama meesha laga saarayo meelaha bannaan si ay u awoodaan inay u dabaaldegaan xafladda oo, dabcan, dejiyaan miisaaniyad.
Qaabka shaqsiyeed ee lagu barto sida loo diyaariyo arooska
Midka ugu horreeya oo dhan waa in la qeexo qaabka ugu shaqsiyeed ee adiga kugu habboon. Waxaa la dhihi karaa isku xirka labada ayaa la sameeyay magaalada, baadiyaha, jawi casri ah, jaceyl, jawi hore, iwm Sida dhadhanka, inaad tahay maalintaada, inaad u qorsheyso sidaad doorbideyso. Aroosyada ugu saxsan ayaa ah kuwa ka tarjumaya nuxurka dhabta ah ee aroosadda iyo aroosadda mid kasta oo ka mid ah faahfaahinta la diyaariyey.
Waad qeexi kartaa sharraxaadda arooska adigoo ugu horreeya waxyaabaha uqalma qorsheynta. Dhammaan adeegyadii iyo faahfaahintii intii lagu guda jiray casho-sharafta Iran ee la xiriirta mawduuca horay loo doortay. Kaliya waa lagama maarmaan inaad ka fikirto dhadhankaaga si aad u ogaato wadarta saxda ah nooca arooska la qaban doono.
Miisaaniyadda la maalgeliyey ayaa ah mid aad ugu dhow lamaanaha. Si looga fogaado lama filaanka daqiiqadaha ugu dambeeya, waxaa lagama maarmaan ah in la qeexo miisaaniyadda si loo xakameeyo kharashka guud. Lammaanaha waxay sameyn karaan liistada adeegyada iyo ugu badnaan kharashyada mid kasta oo ka mid ah si loo fududeeyo raadinta loona hagaajiyo natiijooyinka.
Marka miisaaniyadda la doorto, goobta xafladda lagu qabanayo iyo xafladda waa in la dhigaa. Haddii aan dooranay arooska diinta, waxaa badanaa lagu qabtaa macbud quduus ah sida kaniisad ama hermitage. Marka laga hadlayo arooska madaniga ah, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto goobta dadweynaha ee lagu qaban doono. Meel kasta oo ka mid ah waxay ku habboonaan kartaa federaalka si ay u casho u sameyso. Halkani waa meesha inta badan martidu ay joogi doonaan inta badan maalinta. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la helo jawi wanaagsan oo waafaqsan mawduuca loo aasaasay arooska.
Waad dooran kartaa inaad kireysato is biirsaday is biirsaday, dukaanno cuntada lagu kariyo ama cashada caadiga ah. Qurxinta waa waji aasaasi ah oo aroos iyo aroos badan aysan ka warqabin. Waana in ubaxyadu door muhiim ah ka ciyaaraan maalintan. Thanks to faahfaahintaan yar waxaad dib u abuuri kartaa jawi sixir ah oo aan la ilaawi karin. Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu barto sida loo diyaariyo arooska waa kuwan soo socda:
Rabitaanka cuntada martida
Ubaxyada, waa inaad raadisaa kuwa sida ugufiican loo ilaaliyo uguna cajaa'ibka badan, laakiin isla markaa aan qaali ahayn. Maaha in la iloobo inay tahay nooc qurxin aan adkaysi lahayn. Kaliya ma raadineyno sida loo diyaariyo arooska, laakiin sidoo kale waxaan leenahay xusuus qurux badan. Mid ka mid ah qeybaha ay mudan tahay in la maalgashado ayaa ah sawir qaade iyo sawir qaade kaasoo mas'uul ka ah soo qabashada daqiiqadaha ugu wanaagsan ee xiriiriyahaaga si had iyo jeer loo xusuusto.
Sida loo diyaariyo arooska: faahfaahin
Ka dib oo dhan, waa faahfaahinta isbedelka. Muusiggu waa mid ka mid ah waxyaabaha gaarka u ah arooska. Waxay u taagnayd dhinaca ugu shaqsiyadeed iyo dhadhanka. Waa inaad ka doorataa muusikada xafladda, xafladda iyo qoob ka ciyaarka.
Mid kale oo ka mid ah talaabooyinkiisa aasaasiga ah ayaa ah inuu doorto halka loogu talagalay aroosadda iyo suudka caruusku. Waxaan bixin doonnaa qaar ka mid ah tilmaamaha lagu xusho dharka arooska iyo dharka arooska:
U oggolow naftaada inay hagto dhadhankaaga. Waa maalin gaar ah, ha ku faahfaahin in fikradaha kuwa kale ay ka hormaraan dhadhankaaga shakhsi ahaaneed.
Ha u keenin saaxiibo aad u tiro badan dharka ama lebbiska ku habboon.
Xullo goynta iyo midabka timaha iyo lebbiska ugu habboon.
Ha ka welwelin dhalada arooska ka hor
Ka dooro raaxada tayada.
Maskaxda ku hay fikradda ah sameynta dharka ama dharka si loo qiyaaso
Isku day, si siman ayey u socotaa. Waa lagama maarmaan in tani ay tahay maalinta inteeda kale oo la socota dharka, markaa waxaad ku leedahay deynta.
Ku raaxayso hawshan oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxaad raadineysaa maalin farxad leh oo aad xusuusan karto inta noloshaada ka dhiman. Ha isku xidhin faahfaahinta oo dhan.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto sida loo diyaariyo arooska iyo waxa xisaabta lagu darsado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo diyaariyo aroos
Shaatiyada ragga, gudaha ama dibedda?